Kwaye ndenza ntoni ngenqwelomoya yam? Ingxaki yehlabathi | Ukuhamba kwe-Absolut
Kwaye ndenza ntoni ngenqwelomoya yam? Ingxaki yehlabathi
Ungeniso kwindawo ye intsholongwane ye-Corona Ijika yonke iplanethi ijonge phantsi. Amanye amazwe adlulile okanye antywiliselwe kwinqanaba lesifo esinzulu kwaye amanye amazwe aqala ukubona ukuba angakanani na nangakumbi amatyala avela ngaphakathi kwemida yawo.
Oko kwaqala e-China njengesoyikiso esincinci kuye kwaba yinkxalabo enkulu kubo bonke abemi. Isantya kunye nokulula okusasazeka ngayo kunye nokungabikho kwezitofu zokunyanga kunye nonyango kubangele ukuba abantu abangaphezu kwama-250.000 abasuka kuzo zonke iimbombo zomhlaba bosulelwe kwaye abangaphezu kwama-10.000 XNUMX bafe. Yiyo loo nto oorhulumente abaphambili belizwe ngalinye benyanzelwa ukuba bathathe amanyathelo angaqhelekanga.
1 Uluhlu lwemirhumo. Kuthekani ngenqwelo-moya yam?
2 Indlela yokuphuma kwiitikiti ezingabizi
Uluhlu lwemirhumo. Kuthekani ngenqwelo-moya yam?
E-Spain, inyani yokuba intsholongwane isasazeka ngokukhawuleza oko kuthetha ukuba, ukuyithintela ukuba iqhubeke nokwanda ukuya kwinqanaba lokuwa kwenkqubo yezempilo yesizwe, urhulumente umisele imeko yealam inyanzelisa ii-bar, iivenkile, amashishini ukuba avaliwe kwaye iyakwalela ukuhamba ngokukhululekileyo kwabantu, inyanzela abemi ukuba bahlale bezivalele emakhayeni abo.
Lo mlinganiso, ewe, ukwachaphazela iinqwelomoya, eziye zabuhlungu a ukudilika kokurhoxiswa. Ngokomthetho waseYurophu, abahambi banelungelo lokubuyiselwa indleko zeetikiti zabo ngenxa yokurhoxiswa kweenqwelo moya. Ngaphandle kweli lungelo, ezinye iinkampani ziyala ukubuyisa imali kwaye zinikezela ngezinye iindlela ezinje, njengokumisa inqwelomoya okanye ukutshintshisa itikiti ngevawutsha, elilingana nexabiso letikiti, ukuthenga enye inqwelomoya ukuya kwenye indawo ngomnye umhla. . Ezinye iinkampani, nangona kunjalo, zinika kuphela ithuba lokuhlehlisa uhambo ngenqwelomoya.
La ukurhoxiswa kweenqwelo moya kunye nembuyekezo yemali kubathengi ubeke uninzi lweenqwelo moya kwi imeko enzima, ikakhulu ngenxa yokunqongophala kwemali. Kungenxa yoko le nto bekhangela ezinye iindlela ezinjengezi sele zikhankanyiwe. Kungenxa yale meko, ngenxa yabantu ekufuneka babuyiselwe kwilizwe labo kwaye ngenxa yemvula yamabango uninzi lweentambo zabathengi beenqwelo moya ziwile, zisenza kubenzima ukwenza amabango. Ukujongana nale panorama yobunzima, baninzi abahambi abakhetha ukungabenzi nzima ubomi babo kwaye bangasebenzisi ilungelo labo ekubuyiselweni kwemali yetikiti.
Indlela yokuphuma kwiitikiti ezingabizi
Into yesiqhelo kukusoloko ujonga eyona moya inexabiso eliphantsi. Kufuneka iqatshelwe ukuba Ixabiso letikiti Kuxhomekeka kwizinto eziguquguqukayo ezinje ngemihla yokuhamba, usuku lweveki yenqwelomoya - zikhona iintsuku ezibiza kakhulu kunezinye-ixesha lokuhamba ngenqwelomoya, inani lokuma kunye nexesha lokuhamba kunye nokufika.
Ukurhubuluza kuzo zonke iiwebhu yeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana eyona moya ingabizi kakhulu. Olunye ukhetho kukusebenzisa I-VPN yamatikiti enqwelo moya. Kwaye enye yeeparameter ezichaphazela amaxabiso eenqwelo moya yindawo apho uphando lwenziwa khona.
Omnye VPN yinethiwekhi yabucala ebonakalayo onokuthi uqhagamshele kuyo kwi-intanethi. Yindlela yonxibelelwano ekhuseleke ngakumbi kunonxibelelwano ngothungelwano lwasesidlangalaleni, olungaboneleli ngokhuseleko kumgangatho kubasebenzisi be-Intanethi ngokuchasene nokuhlaselwa okunokwenzeka. I-VPN ibhala iipakethi zedatha kunye nokufikelela kwi-intanethi kwidilesi eyahlukileyo ye-IP kunaleyo yokwenyani. Kungenxa yoko le nto iiVPN zikuvumela ukuba udlule kwii-geoblocks, kuba inethiwekhi yabucala ebonakalayo ikunika ithuba lokukhetha ilizwe ngaphandle kwelakho- kule meko, eSpain. Le IP yintsomi yiyo eyenza ukuba abasebenzisi bakwazi ukugqitha izitshixo. Umzekelo, e-China awukwazi ukufikelela kwi-Facebook, kodwa ukuba sidibanisa i-intanethi e-China ne-VPN, idilesi yayo ye-IP, yithi enye, e-France, isixhobo esizama ukudibanisa kuso ukuba sise-France hayi I-China kwaye, ke, iya kuvumela ukufikelela ku-Facebook. Le nto ikhethekileyo ye-VPNs ikwasivumela ukuba senze iintshukumo ezinje ngokuqhagamshela iqonga levidiyo kunye nokukhetha ikhathalogu yeli qonga kwilizwe apho i-VPN idwelisiwe, endaweni yokuba sibe nekhathalogu yelizwe esikuyo.
Kungenxa yoko le nto sinokusebenzisa iVPN khangela iinqwelomoya ngokungathi besikwelinye ilizwe, ke iindleko zelo tikiti zinokuncitshiswa. Ngoku kufuneka uqale ngokuntywila kumaphepha ahlukeneyo e-web ukuze ufumane eyona moya inexabiso eliphantsi elungele wena ngemihla, ngokuma ...
Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-VPN nganye inika amandla wokunxibelelana ukusuka kwinani elithile lamazwe. Ayizizo zonke iiVPN ezihambelana nenani elifanayo lamazwe ngokufanayo ubuzwe obukhoyo Kukufumana phi idilesi ye-IP, ke ukuba ufuna ilizwe elithile, kungcono ukuba uphande ukhetho ngalunye, ukuze ufumane ukusebenza okufunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Kwaye ndenza ntoni ngenqwelomoya yam? Ingxaki yehlabathi
Yintoni ongayibona eSalzburg